ConvertMore: Guqula Okunye Ukuvakashelwa Kwewebhusayithi Ngale Wijethi Yokuphinda Ushaye Ifoni | Martech Zone
ConvertMore: Guqula Okunye Ukuvakashelwa Kwewebhusayithi Ngale Wijethi Yokuphinda Ushaye Ifoni
NgoMsombuluko, Disemba 27, 2021 NgoMsombuluko, Disemba 27, 2021 Douglas Karr
Njengoba ubuka izibalo zesayithi lakho, into eyodwa ohlale ufuna ukuyenza ukwandisa ukuguqulwa kwezivakashi. Okuqukethwe nolwazi oluhle kakhulu lwabasebenzisi kungaqhuba ukusebenzelana kusayithi, kodwa lokho akusho ngempela ukuvala igebe phakathi kokuzibandakanya kanye nokushayela ukuguqulwa. Uma abantu befuna ukuxhumana nawe mathupha, ingabe uyabavumela ukuba benze kanjalo?
Sinamakhasimende ambalwa manje sisebenzisa amawijethi ekhalenda azenzakalelayo lapho izivakashi zingazenzela khona futhi zidale ama-aphoyintimenti azo ku-inthanethi uma zingafisi ukukhuluma nomuntu ngokushesha. Kodwa kuthiwani uma befuna ukuxhumana nawe ngokushesha? Ngaphandle kwamawijethi engxoxo, inketho eyodwa ongase ufise ukuyihlola iwijethi yokuphinda ushayele.
GuqulaOkwengeziwe inikeza isixazululo esilula sokudala isigelekeqe sokushayela emuva kusayithi lakho. Nge GuqulaOkwengeziwe ungadala:
I-Popup Enesikhathi - setha i-popup enesikhathi ukuthi ivele ngemva kokuba umsebenzisi echithe isikhathi esithile ekhasini lakho. Ungakwazi ukusetha kusengaphambili isibali sikhathi ukuze uthwebule ikhasimende lakho phakathi nemizuzwana embalwa yokuqala kusayithi, ngaphambi kokuthi liphazamiseke futhi lishiye isayithi lakho.
Phuma ku-Popup – I-Popup yokuphuma ivela uma isistimu yokulandelela yobunikazi ye-ConvertMore, ilandelela igundane labasebenzisi bakho lihamba phezu kwenkinobho yokuphuma ekhasini lakho. Ungasetha kusengaphambili okunikezwayo ngokwezifiso kwekhasimende lakho ukuze ulenze lishintshe imiqondo yalo futhi likushayele esikhundleni sokushiya iwebhusayithi yakho.
Inkinobho Entantayo – Le nkinobho intanta phansi kudivayisi yomsebenzisi njengoba ephequlula isayithi lakho. Njengoba ngaphezu kwe-55% yemibuzo eku-inthanethi ivela kubasebenzisi bamaselula, lokhu kuzobanikeza inketho yokukufonela kalula ngaso sonke isikhathi sabo bephequlula iwebhusayithi yakho.
I-ConvertMore inamanani aphansi lapho ukhokha khona kuphela lapho ikholi yenziwe, amawijethi enziwa ngendlela oyifisayo ngokuphelele kumkhiqizo wakho, futhi unedeshibhodi egcwele yokwengamela amazinga akho okuguqulwa kwekholi.
Funda kabanzi ku-ConvertMore
Tags: ukuguqulwa kwekholiideshibhodi yokuguqulwa kwekholicallback widgetchofoza-ukubizaconvertmorephuma ku-popup enhlosokhokha umthofu ngamunyeiwijethi yokuphinda ushaye ucingookuzivelelayo okunesikhathi